Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguJindaporn
umoya wobuqu phakathi kwendalo Ekuphela kwayo kumbindi wesixeko ukuva iintaka zintyiloza ngalo lonke ixesha Kufuphi noMlambo iNan, imozulu entle, amagumbi alula, anesitayile, alungele ukuphumla. Ilungele ukuhamba, izikhululo zikaloliwe, iimarike zasebusuku, ukuhamba, ukuzilolonga, iibhayisekile, iivenkile zekofu kunye nokutya ziyafumaneka.
Umgangatho osezantsi wesakhiwo upolishiweyo ngesamente engenanto, isimbo somgangatho ophezulu, umgangatho ophezulu yinkuni yeteki. Kukho i-terrace yokuhlala kunye nokuphumla, ejikelezwe ziindidi ezahlukeneyo zezityalo. Naphakathi esixekweni akukho ngxolo yimbi ngaphandle kweentaka Yindawo apho indalo igcinwa kangangoko kunokwenzeka. Inkonzo inobubele, njengokuhlala kwikhaya lakho. Kukho oomatshini bokuhlamba impahla, ukomiswa kweempahla kunye neebhayisekile ezifumaneka simahla. iintlobo zesidlo sakusasa Abantu besitayela sePhitsanulok banokungcamla iidessert kunye neziqhamo zasekhaya.
Iimitha ezingama-50 ukusuka kwiZiko leNkcubeko eliMntla kunye noMlambo waseNan, iimitha ezili-100 ukusuka kwiBhulorho ye-Eka Thotsarot, ikhilomitha eli-1 ukusuka eWat Phra Si Rattana Mahathat kunye neWang Chan Palace, i-150 yeemitha ukusuka kwimarike ye-Night Bazaar.
Umbuki zindwendwe ngu- Jindaporn
จากประสบการณ์การทำงานด้านการแข่งขันรถยนต์ ในต่างประเทศ มาร่วม 20 ปี จึงได้กลับมาทำที่พัก สไตล์ บ้านในสวน มุมหนึ่งบริเวณพื้นที่บ้าน และใช้ชีวิตอย่าง เรียบง่ายและช้าๆ เป็นการเพิ่มกิจกรรมให้ครอบครัว ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าพัก ด้วยการต้อนรับและดูแลอย่างเป็นกันเอง อบอุ่น ประกอบกับสถานที่ตั้งของที่พักแห่งนี้ อยู่ในเมืองพิษณุโลก ผู้เข้าพัก จะได้รับความสะดวก ปลอดภัย สัมผัสธรรมชาติ รอบบริเวณที่พัก ชมบรรยากาศริมแม่น้ำน่าน ด้วยการเดิน ปั่นจักรยาน บริการฟรี การท่องเที่ยวสวนเกษตร ปลอดสาร ผลไม้ตามฤดูกาล การทำนาข้าว ปลอดสาร ในเมือง เพื่อให้ผู้เข้าพักประทับใจและได้มีโอกาสแวะเวียนกลับมาเที่ยวอีก
จากประสบการณ์การทำงานด้านการแข่งขันรถยนต์ ในต่างประเทศ มาร่วม 20 ปี จึงได้กลับมาทำที่พัก สไตล์ บ้านในสวน มุมหนึ่งบริเวณพื้นที่บ้าน และใช้ชีวิตอย่าง เรียบง่ายและช้าๆ เป็นการเพิ่มกิจ…
Iilwimi: English, Français, ภาษาไทย